Indonesia in Focus: Toerana tena mpizaha tany indrindra toerana ao Indonezia.
Toerana tena mpizaha tany indrindra toerana ao Indonezia.
Ny mitaingina Tsy vita (377)
(Fizarana telon-jato sy fito-fito), Depok, West Java, Indonezia, Septambra 27, 2015, 1:32 PM).
Toerana tena mpizaha tany indrindra
toerana ao Indonezia.
Ankoatra ny amin'ny nosy Bali, Indonezia toa manana ny hatsarany ny toerana fizahan-tany tsara tarehy ary na dia be kokoa tsara tarehy sy tena mendrika mba hitsidika sy tsy ho hadino ho an'ny mpizaha tany, izay tsy mbola nitsidika, ankoatra ny hafa:
Marine Park Raja Ampat, Papouasie Fa ny samy hafa sy tia ny tontolo anaty rano zaridaina, dia antsitrika paradisa izay maneho ny harena an-dranomasina ny fiainana dia mahagaga. Ny iray amin'ireo malaza indrindra manintona Raja Ampat zaridaina an-dranomasina. Io faritra Antsoina hoe ny Coral Reef Paradisa na ny paradisa ny vatohara amin'ny samy hafa eto amin'izao tontolo izao. Location Attractions Raja Ampat zaridaina an-dranomasina no misy ao West Papouasie.
Raja Ampat dia distrika vaovao ao amin'ny fizarana lehibe wilaya distrika mihetsika amin'ny 4.6 tapitrisa hektara. Eo ho eo amin'ny 85% ny fitambaran'ny faritra ny ranomasina, raha ny sisa dia vondrona ny nosy sy ny vato harana sasany atolls 610 nosy. Ao amin 'ny an-jatony ny nosy volotara 35 nosy ihany ireo mponina ny teratany olona.
Raja Ampat Islands dia tsy heverina ho toy ny fototry ny natiora Indonezia amin'ny endrika an-dranomasina lehibe indrindra zaridaina any Indonezia, nefa koa nino ny manana harena an-dranomasina ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Manambara panoramic Attractions Raja Ampat zaridaina an-dranomasina dia nanomboka rehefa tompon-pirenena holandey antsoina hoe Maxx Ammer mpisitrika nitsidika ny faritra tamin'ny 1990.
Attractions Raja Ampat an-dranomasina zaridaina dia faritra ny vatohara amin'ny harena an-dranomasina ny fiainana eto an-tany, dia manana, fara fahakeliny, 1300 karazan-trondro, 600 karazana haran-dranomasina, ary 700 ny karazana betsimitsitekiteky, tsy lazaina intsony ny isan-karazany ny sokatra, ahidrano sy ny jellyfish. Ny lehibe indrindra manerana izao tontolo izao harena vato harana Telolafin'i faritra, izany hoe ny Filipina, Indonezia, ary Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Raha jerena ny sakany ny zavamaniry an-drano manintona Papua Raja Ampat zaridaina an-dranomasina sy ny manan-karena isan-karazany ny fiainana an-dranomasina, dia afaka misafidy ny teboka mba hanomboka ny Manitrika. Manodidina ny nosy Kri, ianao dia afaka mahita ny hatsaran-tarehy ny vatohara sy ny karazan-trondro maro izay mahavariana, anisan'izany ny karazana Queensland Tarataka, pompano, Tsivaravara, Tarataka, vatohara antsantsa, lamàtra, napoeleon wrasse, Barracuda, ary goavam-be trevelly.
Manitrika hafa harambato voasaron-drano eo amin'ny Marine Park Attractions Raja Ampat Papua ao sardinina Reef miaraka ny halalin'ny tokony ho 10 metatra. Ity toerana ity manompo trondro isan-karazany ao anatin'izany ny parrotfish izay manana loko mamirapiratra. Raha te hanandrana ny fihetseham-po ny ho ao amin'ny vatolampy ny tionelina, dia afaka mitsoraka manodidina ny nosy Kaboei Bay Rock. Misy Cove vatolampy ambany tonelina. Kaboei Bay Rock lava-bato ihany koa ny nahita vato harana mponina ny ramanavy Ole, ary any amin'ny toerana sasany hita taolana sisa tavela tamin'ny olombelona.
Misy maro hafa harambato voasaron-drano eo amin'ny Attractions Manitrika Papua Raja Ampat Marine Park afaka hijery, toy ilay andalana, FAM Nosy, ary ny nosy Misool. Ankoatra ny mankafy ny harena an-dranomasina ny fiainana, dia afaka ihany koa ny mankafy ny toerana manan-tantara eo ambanin'ny ranomasina, ao anatin'izany ny sambo mpiady sy ny ady fiaramanidina izay dia nilentika tamin'ny rano Attractions Papua Raja Ampat zaridaina an-dranomasina. Tsy izay ihany, ianao koa dia afaka mahazo hatsaran-tarehy ny ny faritra nosy Papua Attractions Raja Ampat zaridaina ao an-dranomasina 'ny toetry ny madio mangalahala, Lagoon, ary ny helo-drano mbola arovana, manana mihinjitra ny manaitra tora-pasika sy ny ranomasina kristaly rano.
Ianao no liana amin'ny nitsidika manintona Papua Raja Ampat zaridaina an-dranomasina azo niala tao Jakarta na tanàn-dehibe hafa ny Domine Eduard Osok, Sorong, West Papouasie. Flights avy any Jakarta ho Sorong matetika Transit ao Makassar na Manado. Avy Domine Eduard Osok, dia afaka miroso amin 'manintona avy hatrany Raja Ampat zaridaina an-dranomasina miaraka amin'ny bunch ny fifadian-kanina sambo berkafasitas 10 olona eo ho eo ny vola lany amin'ny 3.2 tapitrisa USD isaky ny lalana ho 4 ora.
Tsy misy tapakila manokana hiditra ny rano faritra mahasarika Raja Ampat zaridaina an-dranomasina. Na izany aza, ny vidiny hanofa ny maotera sambo, fitaovana samy hafa sy ny mpampianatra miainga amin'ny ana hetsiny ny an-tapitrisany Rupiah amin'ny Manitrika iray. Diving dingana izany dia matetika nentina nivoaka matetika mba hankafy ny Manitrika toerana tsy mitovy. Noho izany, dia tokony hatao mba hanafoanana mirohotra samy hafa ny habetsaky ny fandaniana izay somary lafo.
Faritra manintona Papua Raja Ampat zaridaina an-dranomasina, dia afaka mahazo ampy amin'ny trano misy Resorts sasany, toy ny ao amin'ny nosy Kri, Waigeo, Mansuar, ary Misool. Misy Resorts nametraka ny vidiny dia somary lafo satria manolotra toerana feno. Raha avy amin'ny teti-bola ambany, ny governemanta-nanana ala nenina mety ho safidy.
Hafa hafa hankafy ny zavatra manintona Papua valan-javaboary an-dranomasina Raja Ampat dia amin'ny alalan'ny fisafidianana ny hijanona eo-tsambokely mbamin'ny olona nokaramainy Pinisi sambo izay efa farany antsitrika asa manokana ho andro vitsivitsy. Ny sambo manana kafasitas ambony indrindra ny 14 ny olona tamin'ny vidiny ny tokony ho 90 tapitrisa ny 110 tapitrisa ho Cruise nandritra ny herinandro.
Anaty rano paradisa
Amin'ny maha iray amin'ireo valan-javaboary an-dranomasina voalohany eto amin'izao tontolo izao, ny hatsaran 'ny tontolo anaty rano Bunaken, Manado Sulawesi avaratra tsara fantatra ao amin'ny fiaraha-monina iraisam-pirenena, indrindra ny scuba samy hafa. Raha ny marina, tamin'ny taona 2005, Bunaken lasa izao tontolo izao lova toerana taorian'ny governemanta Indoneziana hisoratra anarana Bunaken ho UNESCO. Amin'ny faritra ny 75 625 hektara eo ho eo, antsitrika mpankafy dia mandroba ny maro Manitrika toerana. Bunaken Marine Park manana hevitra Manitrika toerana 20, 12 izay eo amin'ny nosy Bunaken. Isan'ny toerana Manitrika mety afaka mampitombo miaraka amin'ny isan'ny manadihady samy hafa ny hatsaran-tarehy ny Bunaken anaty rano.
Ao amin 'ny 20 hevitra Manitrika toerana, ny toerana tena indrindra eto hafa ao Home Village, Lekuan, Fukui Point, Mandolin ponit sy Atsinanana Bunaken. Ny samy hafa, izay mitsidika ny Bunaken matetika Manitrika toerana hafa manana toerana tena. Ohatra, ny mpisitrika izay tia ny mitsoraka toerana antsantsa dia manana toerana tena hafa maro samy hafa izay mitady fitiavana fay. Anaty rano mpaka sary sambatra mitady seahorses, flamboyant cuttlefish, sy ny hafa sary macro zavatra izay misy ambanin'ny ranomasina.
Ny haavon'ny hisongadina ao anaty rano mahatratra 20 metatra, indraindray, rehefa tsara aho haavon'ny fahitana afaka hahatratra 35 metatra. Azonao jerena ny hatsaran 'ny vatohara ny Bunaken Marine Park, izay iray amin'ireo tsara indrindra eo amin'izao tontolo izao. Misy 390 eo ho eo ny karazana haran-dranomasina maro loko vato harana no mahagaga. Berlekak-Dent endrika tsy manam-paharoa amin'ny triatra niakatra ho any ny kely na ny tonelina lava-bato eo ambany ranomasina izay tsy ho hita any amin'ny toeran-kafa.
Derawan nosy miorina ao amin'ny vondronosy ny Derawan, Derawan distrika, fivondronana Berau, North Borneo, tarika Derawan nosy Morphologie dia bertopografi fisaka lemaka amoron-tsiraka. Sand torapasika manana tehezan ny tokony ho 7 ° - 11 ° miaraka amin'ny sakan'ny 13.5 ka hatramin'ny 20 metatra.
Ao amin'ny rano manodidina dia an-dranomasina zaridaina sy malaza toy ny mpizaha antsitrika (antsitrika) miaraka ny halalin'ny tokony ho dimy metatra. Misy isan-karazany ny an-dranomasina ny fiainana eto, toy ny angisy (cuttlefish), orana, trondro sodina (ghostpipe trondro), orita (bluering orita), nudibranchs, soavalin-dranomasina (seahorses), amalona kofehy (kofehy amalona) sy ny trondro skorpion (Scorpionfishes ).
Ao amin'ny vatolampy amin'ny halalin'ny folo metatra, misy harambato fantatra amin'ny hoe "manga trigger rindrina", satria ny haran-dranomasina amin'ny ny halavany dia 18 metatra miteraka be dia be ny trondro (mena-toothed trigger trondro).
Derawan dia nosy amin'ny ranomasina-miloko matoatoa va ny manga sy maitso fomba fijery, fotsy fasika malefaka, andalana be rofia teo amin'ny morontsiraka, miaraka amin'ny kely ala eo afovoan'ny ny nosy izay ny toeram-ponenana ny isan-karazany karazana zava-maniry sy ny biby ary ny voajanahary tsara tarehy ny ambany mahatalanjona Ocean. Aza gaga raha nosy afaka ambony laharana fahatelo izao tontolo izao ho toy ny kilasy ary manao antsitrika toerana nosy io nofy nosy ho an'ny samy hafa.
Manodidina ny nosy Derawan, na iza na 28 teboka Manitrika efa fantatra. Mba hijery izany rehetra izany, fara fahakeliny, teboka mila tokony ho 10 andro tamin'ny Manitrika iray isaky ny teboka. Hifindra avy amin'ny hevitra iray hafa, mpitsidika Afaka mampiasa ny sambo. Mandritra izany fotoana izany, ny mpitsidika dia afaka ihany koa ny hijery ny nosy an-tongotra.
Dr. Carden tany mafana Wallace ny mozea Queensland, any Aostralia no nandinika ny harena an-dranomasina ny nosy Derawan ka nahita mihoatra ny 50 isan-karazany ny arcropora (dranomasina biby) ao amin'ny Haran-dranomasina. Tsy misy toa raha Derawan nosy dia malaza tahaka ny fahatelo avo indrindra eo amin'izao tontolo izao ho toy ny toerana Manitrika iraisam-pirenena.
Ny vatohara ao amin'ny saikanosy ny Derawan miely patrana any amin'ny nosy iray manontolo, ary kilan'ny tao Derawan vondronosy. Hirst-tongotra natao tany Long Island tafiditra kilan'ny, main'ny masimbung, may buliulin, pinaka kilan'ny, main'ny ary may tababinga muaras.
Reef karazana in Derawan vondronosy dia ahitana ny fringing, sakana vatohara sy ny atolls. Atoll ity izay efa natsangana ho any an-nosy, ary namorona an-dranomasina farihy. "Manta vohavoha fanadihadiana 2003" dia maneho eo ho eo fonony ny vatohara any amin'ny nosy lava dia 24,25% ny 34,88 ho an'ny vatohara mafy sy ny haran-dranomasina ny fiainana. Ny vatohara any amin'ny nosy Derawan manana rakotra vato harana eo ho eo ny vatohara mafy 17,41% sy 27,78% velona rakotra vato harana. Miaraka amin'ny isan'ny karazana ny 470 460 dia toa manondro fa ho harena ny harena voajanahary faharoa taorian'ny Ampat Raja vondronosy.
Coral Reef faritra lehibe indrindra:
halavan'ny faritra andrefan'i ny nosy (Inlet sy ny fantsona)
muaras amin'ny avo isan-karazany ny vato harana, vato harana ara-pahasalamana sy ny hatsarana sanda
malalungun haran-dranomasina, avo fahasamihafana amin'ny rafitra sarotra amin'ny toeram-ponenana isan-karazany
lehibe vato harana-karena toeram-ponenana
Reef trondro fanadihadiana tamin'ny 2003 dia nampiseho fa mamokatra 832 nosy io karazany. Ankoatra izany, dia tombanana misy, fara fahakeliny, 1.051 karazana ao amin'ny rano Berau amin'ny gobes indrindra karazany (Gobiidae), wrasses (Labridae), ary ny damselfishes (Pomacentridae).
Indraindray, rehefa mipetraka eo amin'ny faran'ny tetezana vita amin'ny hazo izay mitondra any an-dranomasina, dia afaka mahita ny maitso sokatra sy eroa eny ambonin'ny rano ny mazava. Rehefa antsitrika niaraka koa izahay ny sokatra izay milomano manodidina antsika. Indraindray dia ny sokatra izay toa mandehandeha manodidina ny trano bongony no misy eo amoron-dranomasina amin'ny nosy. Tamin'ny naha alina ny andro, ny sasany niakatra sokatra an-tanety, ary hametraka ny atodiny tao.
Mpitsidika dia afaka ihany koa ny hafa hijery nosy manodidina Derawan. Ohatra: mpanao asa soa Island, Maratua, ary ny kakaban nosy izay manana ny tsy manam-paharoa. Blue Fay mpanindrona (fay) izay nahatratra 3,5 metatra ny sakany mponina ao amin'ny nosy ny fiantrana. Raha ny marina, dia afaka ho hita ihany koa-raha tsara vintana, mainty Fay mpanindrona amin'ny malalaka "ny fivelatry" 6 metatra. Raha ny nosy manana kakaban tsy manam-paharoa ny endriky ny prehistoric farihy eo afovoan'ny ranomasina, ilay hany iray any Azia.
Miavaka sy karazam-biby arovana izay mety ho hita eo amin'ny voaniho foza (Birgus latro), trozona, ny feso (Delphinus), maitso sokatra (Chelonia mydas), hawksbill (erethmochelys fimbriata), ary ny dugong (Dugong dugon). Voaniho foza dia hita ao amin'ny nosy kakaban sy Maratua. Papa dia hita manerana ny nosy Maratua amin'ny vanim-potoana manokana, raha manodidina ny nosy feso Semama, fiantrana, kakaban, Maratua, ary kilan'ny muaras.
Sokatra dia hita manodidina ny Long Island, Derawan, Semama, mpanao asa soa sy Maratua sy dugongs tany Long Island sy Semama. Tsy manam-paharoa hafa karazana fay (manta birostris) any amin'ny nosy fiantrana sy pigmy Soavalin-dranomasina mitsipitsipika ao amin'ny nosy Semama sy Derawan.
Fitaovana sy ny Accommodation
Derawan manome toerana toy ny zohy fialofan'ny, Manitrika fitaovana, speedboats sy ny toeram-pisakafoanana. Derawan nosy ilaina ihany koa ny manome izay tsy lafo loatra izay no mitantana ny toerana.
Ireo trano ireo juts tsotra efa ho 100 metatra any an-dranomasina mba hahatonga ny mponina dia afaka malalaka mahita miloko isan-karazany trondro sy ny sokatra nandalo-kalalahana tsy manelingelina na iza na iza. Ny sakafo no tena sakafo tsotra indrindra amin'ny sakafo ny dranomasina lehibe trondro sy ny sakafo am-bifotsy tokoa tsy hanimba ny rivo-piainana fifaliana andro aman-alina eo amin'ny nosy ity.
Mba hahazoana any amin'ny nosy Derawan, mpizaha tany eo ho eo dia afaka manidina ny 3 ora any Balikpapan, East Kalimantan, amin'ny alalan'ny fiaramanidina avy any Jakarta, Surabaya, Yogyakarta na Denpasar.
Avy Aberdeen, mbola tsy maintsy fiaramanidina nankany Cape Redeb Manitrika ora iray ny fiaramanidina, Kal Star, Deraya na DAS. Ankoatra izany, Cap Redeb koa ho tonga amin'ny ranomasina, hiaraka amin'ny niakatra avy Samarinda, ny renivohitr'i Kalimantan Atsinanana Tarakan, ny renivohitr'i Borneo Avaratra any Cape Redeb arahin'ny nanofa botry.
Nandeha tany amin'ny nosy Lombok.
Lombok, West Nusa Tenggara (mponina tamin'ny 2001: 2.722.123 mponina) dia nosy ao amin'ny Lesser Sunda Nosy na dia tafasaraka Nusa Tenggara ny Lombok Andilan-dranomasin'i ny Bali in Sebelat Indrisy Andilan-dranomasin'i any andrefana sy atsinanan'i Sumbawa. Ny nosy dia boribory eo ho eo amin'ny karazana "rambo" eo amin'ny lafiny atsimoandrefan'i ny halavany eo ho eo 70 km. Nosy io faritra mahatratra 5.435 km², mametraka azy laharana faha 108 avy amin'ny lisitry ny nosy dia mifototra amin'ny ny haben'ny izao tontolo izao. Ny tena tanàna ao amin'ny nosy no Mataram.
Lombok Island dia nalaza noho ny hatsaran-tarehy ny voajanahary ny hafakely sy mahavariana. Lombok nosy tsy manana Gili telo nosy. Ankoatra ny Gili Trawangan, Gili Air sy Gili Meno. Lombok nosy mbola manana Dyke mitovy tsara tarehy. Iray ihany no Gili Kondo any atsinanan'ny nosy Lombok.
Lombok Island ankehitriny ho iray amin'ireo sary masina Indoneziana fizahan-tany, hatsaran-tarehy ny nosy dia faharoa ny misy any Indonezia, ny fitiavana mandray vahiny Sasak olona, hatsaran-tarehy ny torapasika izay tena fotsy, vatohara sy niteraka harena ny mampitolagaga, famirapiratan'ny tendrombohitra Rinjani sy ara-kolotsaina tsy manam-paharoa Sasak maro Manasa fankasitrahana an-toerana sy vahiny mpizaha tany.
Ny hatsaran 'ny nosy sy ny eksotismenya Lombok dia hanasa anao sy ny mpiara-miombon'antoka noho ny volan-tantely eto. Toy izany koa amin'ny Exotisme Gilis Island Manasa anao ihany koa ho tia ny hatsaran-tarehy ny nosy.
Io nosy dia iray amin'ireo nosy lehibe indrindra roa tompony ny Faritanin 'i West Nusa Tenggara. Ny hatsaran-tarehy ny tontolo, ka ny nosy Lombok mba ho iray honeymoon toerana izay tsara ihany koa. Rehefa tsy maintsy ho fantatrareo izay misy ny tongotra vao mainka tokony, ny hatsaran-tarehin'ny Lombok azo nisafo eo ilay dia.
Amin'ny tora-pasika tsara tarehy mahagaga, heni-kaja Mt Rinjani sy mahatalanjona ny fiainana an-dranomasina mba hahita, ny nosy Lombok any West Nusa Tenggara toerana maro mpizaha tany na an-tanety sy an-dranomasina. Tsy mahagaga dia izany no toerana malaza indrindra ao West Nusa Tenggara.
Just mitsidika eto mba mahatsapa ny onja lehibe onja eo atsimo morontsiraka. Fanamby ny tsinay mba mananika an-tampon-volkano. Manakarama bisikileta sy ny moto mba hialàna an-dalambe teny an-tanimbary. Na aiza na aiza tianao meghabiskan ny fotoana, dia tsy ho diso fanantenana amin'ny hatsaran-tarehy ny mahagaga voajanahary eto.
Mpitsidika hafa Lombok misafidy ny mandany ny fotoana amin'ny nosy Gili-Gili, dia nitokana tany mafana nosy amin'ny tora-pasika dia mahafinaritra sy mirentirenty manodidina.
Tany am-boalohany mponina any Lombok dia Sasak, Lombok an-trano ihany koa ho an'ny olona Hindu Bali, ary koa maro ny Sinoa, Javaney, Bugis sy ny Arabo.
Ny olona sasany Sasak nanaiky ny finoana Silamo Wektu telu didefinisikann ho "Islam in-telo" manondro ny vavaka in-telo isan'andro sy ny hafa miaraka amin'ny silamo, izay mivavaka 5 isan'andro. Wektu telu fivavahana no tsy manam-paharoa izay fomba amam-panao fahiny incorporates sy ny finoana silamo, ireo zavatra inoana hita afa-tsy ao Avaratra Lombok. Dia ny tenan'izy finoana io no Silamo, fa miaraka amin'izay koa, hiaritra fombafomba nentin-drazana. Ohatra toy ny Nyiu lanonana natao rehefa afaka zato andro misy olona maty. Fianakaviana ny olona izay maty fanomezana toy ny fitafiana, borosy nify sy ny sakafo mba hahatonga ny olona maty dia ho tony any an-danitra.
Nankalaza fety ara-pivavahana hafa teo am-piandohan'ny ny orana (Oktobra ho Desambra), na ny fotoam-pijinjana (Aprily-Mey) amin'ny fankalazana amin'ny tanàna manerana ny nosy.
Sasak ny kolontsaina no tena zava-dehibe ho amin'ny hery sy ny fahaiza-manao ara-batana, ary be dia be ny fomba amam-panao eo an-toerana mereflesika ity kolontsaina ity. Peresehan dia fomba amam-panao eo an-toerana izay Mitambatra ny ady eo amin'ny roa lahy izay Nampiasa tehina lava sy ampinga kely miendrika bujung ny cowhide tranom-borona.
Mozika sy ny dihy no tena zava-dehibe ao Sasak kolontsaina. Nandihy ny dihy nentin-drazana manan-danja nandritra ny fombafomba. Ity dihy ny ady niandohan'ny dihy, toy ny Beleq amponga (lehibe amponga) mandra-Cupak Gerantang malaza izay milaza ny tantara ny fitiavana sy ny olon-tiany.
Tsidiho ny manam-paharoa Pura Lingsar, ny fitambaran'ny tempoly Balinese Hindoa sy ny finoany Wektu telu amin'ny sarotra iray.
Manodidina ary niantsena tao an-tsena tanàna Surandi skyline. Misy ny sasany toerana fitsangatsanganana mahafinaritra mba miala sasatra sy hiala sasatra.
Hizaha toetra ny vintana miaraka amin'ny fitsidihana ny racetrack any an-tsaha Salakalas. Ny hazakazaka no natao isaky ny Alahady. Jereo ny tanora no ampiasaina hitaingina rameva amin'ny fifaninanana mafy ho amin'ny tsipika fahatongavana izay ny mpandresy dia memberika mitsiky fandresena. Izany hazakazaka izany dia tena zava-dehibe ny alina talohan'ny ny hazakazaka, ny mponina dia fanorana ny soavaliny, ary indraindray gamelan milalao mozika mba hampitony soavaly.
Fanamby ny tsinay mba mananika ny avo any an-tendrombohitra Rinjani. Nandritra ny Altitude maherin'ny 3.700 metatra ambonin'ny ranomasina, heni-kaja io rehefa niakatra tendrombohitra volkano dia haka andro telo, fara fahakeliny, ary tsy soso-kevitra ho an'ny olona amin'ny fo aretina. Raha vao ny tampon ny harerahana dia ho aloa amin'ny tontolo voajanahary miavaka Indonezia.
Mahatsapa ny fasika amin'ny faladianao sy milomano ao amin'ny amorontsiraka rano mamirapiratra ao amin'ny Kuta Atsimo Lombok. White fasika sy mahatalanjona ho ranomasimbe hevitra eto amin'ity toerana ity ho toy ny mpizaha tany curved toerana mahazatra. Tsidiho ny Nyale Fishing Kuta nandritra ny fety fanao isan-taona, natao matetika tamin'ny Febroary na Martsa sy hankafy ny fety sy ny diabe ny lokony.
Sunbathing sy nilalao onja amin'ny tora-pasika ny Batu tsara tarehy Bolong. Io amoron-dranomasina mitondra ny anarany ao amin'ny vato lehibe loaka eo afovoany. Ataovy azo antoka ianao tsara tarehy toy ny mahazatra ny masoandro ny masoandro rehefa nanomboka nilentika tany an-tendrombohitra Agung Bali amin'ny mampino mirehitra loko.
Mianara mikasika ny tantara an-toerana sy mitsidika Meruya rano Palace in Mataram, renivohitry Lombok. Ity toerana ity dia naorina tamin'ny 1744, ary taloha dia ady mihoson-drà eo amin'ny Holandy sy ny mponina any Bali tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19.
Hiaina ny fahatonian'ny tempoly lehibe indrindra Lombok, Pura Meru, any ambadiky ny Rano Park. Ny tempoly, izay nandritra ny taonjato maro no natokana ho an'ny Hindu Trimurti ny Brahma, Vhisnu, ary Shiva.
Toerana mba handeha amin'ny fiaramanidina azo nalaina tao amin'ny Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bali, ho any an-tanànan'i Mataram.
City of Bukittinggi, Sumatra Andrefana ara-tantara dia tanàna, tanàna toerana nahaterahan'i ny telo mahery fo lehibe ny Indonezia, ary koa tanàna amin'ny mpizaha tany exoticism mahafatifaty. Bukittingggi ny fepetra rehetra ho lasa lasibatra mpizaha tany ho an'ny mpitsidika. Tao an-tanàna izay nanao Desambra 17 toy ny tsingerin-taona izany dia misy ny Clock Tilikambo izay dia nanan-tantara tao an-tanàna, ny vakoka ny fanjanahan-tany sy ny tranom-bakoka Minangkabau tantara ny kolontsaina sy Bung Hatta Palace.
Bukittinggi ara-pitantanana efa nanomboka endrika fanjanahan-tany holandey vanim-potoana. Zavatra nanao Bukittinggi ho Gemeentelijk Resort na ny kaominina monina Gazette tamin'ny 1828 niaraka tamin'ny 32 hafa Gemeentelijk Resort any Indonezia. Ity sata mahatonga Bukittinggi raha efa manana Gemeenteroad na ny fitondram-panjakana mahaleotena ny maro an'isa dia tsy maintsy fehezin'ny ny Holandey. Ao Singapore ihany koa ny nanorina tanàna mimanda atao hoe "Fort De Kock". Ny Fort dia mbola simba, ary ho toy ny iray amin'ireo zavatra manintona ny tantara. Ny tanàna ihany koa ampiasain'ny mpifehy holandey izay any amin'ny atsinanana zanatany mba hiala sasatra.
Nandritra ny asa Japoney, Bukittinggi anarana avy Fort de Kock Taddsgemente ho Bukittinggi Si Yaku Sho tamin'ny koa ny zavatra ankehitriny ny Agam District. Japana ihany koa ny onjam-peo nanorina fampitan nosy lehibe indrindra Sumatra noho ny fampielezan-kevitra. Koa araka ny governemanta ao an-toerana, ny Japoney koa ny Singapore ho toy ny didy miaramila faha-25 ho an'ny fanaraha-maso ny tafika tany Sumatra, Singapore ho any Thailand.
Taorian'ny Indonezia ny fahaleovan-tena, Bukittinggi na oviana na oviana ho toy ny foibe ho an'ny fahaleovan-tena miaro tolona. Na dia ao Desambra 1948 hatramin'ny Jona 1949, Londres dia nampiasaina ho toy ny renivohitr'i Governemanta Vonjy taitra Repoblikan'i Indonezia (PDRI) nitondra ny Mr. Sjafroedin Prawiranegara. Ny fanapahan-kevitra navoaka ny Filoha araka ny Yogyakarta latsaka eo an-tanan'ny Holandy noho ny herisetra ara-tafika II. Rehefa afaka izany, Bukittingti tendrena ho ny renivohitr'i Sumatra, ary tamin'ny 1959 nanao ny renivohitr'i Afovoany Sumatra. Taorian'ny amin'ny fampandrosoana ny Sumatra Andrefana, Bukittinggi manompo toy ny renivohitr'i Sumatra Andrefana talohan'ny farany tamin'ny 1978 dia nafindra ho any an-tanànan'i Padang.
Bukittinggi be dia be manodidina ny 250.239 km2 takatry ahitana be tendrombohitra sy lohasaha. Ny havoana dia hita ao amin'ny New York City dia andiana tendrombohitra rojo fehin-kibo. Eo amin'ny lafiny ny havoana, ny tanàna ihany koa voahodidina tendrombohitra tida dia Tendrombohitra Merapi, Tendrombohitra Singgalang, ary tendrombohitra Sago. Ny fisian'ny telo tendrombohitra no antony New York City koa dia antsoina hoe ny City Tri Arga. Fanahafana ara-jeografika Bukittinggi toerana be havoana ary misy 900 metatra ambonin'ny (asl ambonin'ny haabon'ny ranomasina), fanaovana ny rivotra any New York City sy mangatsiatsiaka.
Fizahan-tany mety ny Bukittinggi, andrefan'i Sumatra ao amin'ny kajy ny governemanta eo an-toerana, isaina ho efa ho ny 30% amin'ny fidiram-bola tanteraka (paritra Original ny hetra). Azo antoka fa tsy mahagaga, fa ny mety ho fizahan-tany ao an-tanàna dia somary tanteraka. Nature fizahan-tany Bukittinggi zavatra tohanan'ny ny fisian'ny havoana izay manodidina ny tanàna. Mahazatra rivotra iainana eny an-tendrombohitra miaraka amin'ny rivotra mangatsiatsiaka Bukittinggi mahatonga adin-tsaina mety ho fanafahana ho an'ny mpizaha tany. Green habakabaky ny tontolo ny havoana ihany koa dia mety ho sary tia lasibatra. Ny hatsaran-tarehy ny maso azo hanina rehefa mpizaha tany teny amin'ny lohasaha tanàna.
Amin'ny maha iray amin'ireo foibe ny Minangkabau kolontsaina, Bukittinggi ankehitriny prototypes ny Minangkabau kolontsaina. Fanao trano, pakaiaan, fiteny nahandro ny mahazatra dia hita ao amin'ny Bukittinggi. Amin'ny zoro rehetra, Bukittinggi ankehitriny trano gadang Minangkabau kolontsaina miavaka. Kendreo ny trano dia nilahatra tamin'ny ombidia tafo miendrika tandroka. Ato amin'ireto trano ireto, ny mpizaha tany ihany koa dia afaka mankafy ny sary sokitra ny modelin'ny Minangkabau voatanisa ao amin'ny rindrin'ny trano. Mbola an-toerana mampiasa akanjo nentim-paharazana Minangkabau andavanandro.
Ny rivotra iainana ny maraina ao an-tanànan'i Bukittinggi manokana ihany koa ny mahatsiaro. Sunrice toerana manodidina amin'ny lanitra manga mbola saro-kenatra miaraka amin'ny Silhouette ny tendrombohitra dia tena mety ho ampiasaina ho toy ny fampisehoana. Toy izany dia zava azo lasibatra amin'ny toerana rehetra amin'ny kompà. Amin'ny alina, indrindra rehefa misy ny fankalazana, ny lokony sy ny afomanga flickering jiro fahita tao an-tanànan'i Bukittinggi.
Endri-javatra iray hafa izay mety ho hita mpizaha tany ao Bukittinggi dia miorina akaikin'ny manintona voajanahary Sianok hantsana. Distance Bukittinggi amin'ny hantsana Sianok mety ho tonga amin'ny tany ho adiny telo eo ho eo. Teny an-dalana ihany koa ny mpitsidika dia afaka mijanona amin'ny alalan'ny mba hankafy ny zavatra manintona ny Clock Tower, dia natanjaka be Ford de Kock, ary koa ny lava-bato fanjanahantany Japoney lova. Tsy mba hanadino, endri-javatra iray hafa ny Bukittinggi no lalana ho any amin'ny zavatra izay miolikolika. Ao Bukittinggi fantatra na Curved zorony roa-polo 44 ampek ampek mba ho Lake Maninjau. Travelling manodidina an-jorony dia hanome fihetseham-po hafa, indrindra ho an'ny mpizaha tany izay tia ny fiara.
City of Bukittinggi dia kaominina iray miorina ao amin'ny faritanin'i West Sumatra. Ara-jeografika, dia any amin'ny 100,210 ny 100,250 degre jarahasina atsinanana sy teo anelanelan'ny 00 760 - 00,190 LS. Raha ny fihoaram- Sumatra Andrefana renivohitr'i Padang, Bukittinggi no misy 90 km eo ho eo ny avaratra.
Ny fidirana ho ao an-tanànan'i Londres dia mety ho azo avy amin'ny tanàna maro tany Sumatra Andrefana. Rehefa mampiasa telefaona an-tariby, mpizaha tany afaka mampiasa hazo fijaliana-Sumatra lalana mandritra avy any Lampung faritanin'i ho NAD. Mpanelanelana, fa mpizaha tany izay mampiasa ny rivotra lalana, mpizaha tany afaka mampiasa ny hevitra ny fandroahana any Padang ho seeked tafika bebe kokoa. Raha ny mitsidika isan-karazany ao amin'ny Bukittinggi manintona mpizaha tany afaka mampiasa fomba isan-karazany ny fitateram-bahoaka dia misy mitovy ny ao Bukittinggi
E. Accommodation sy ny hafa Facilities
Ho fanohanana ny sehatry ny fizahan-tany any Londona amin'izao fotoana izao dia misy 43 sekely kintana sy ny teti-bola na trano fandraisam-bahiny miampy 11 mes / vahiny trano / trano bongony. Ny fisian'ny zavatra ilaina toy izany ihany koa ny manohana ny andraikitry ny Singapore ho toy ny trano fototra ho an'ny fizahan-tany ao amin'ny faritanin'i Sumatra Andrefana.
Ary ny trano fisakafoanana sy ny trano fisakafoanana, tany Londres misy toeram-pisakafoanana sy ny trano fisakafoanana, indrindra fa any amin'ny faritra, Los Lambuang. Ao amin'io faritra io, ny mpitsidika dia afaka pamper ny tsirony tsiry tamin'ny sakafo mahazatra Minangkabau. Tsy lavitra ny faritra Los Lambuang, ary akaikin'ny manintona, maro ihany koa ireo sampan-draharaha Travel vonona ny hanompo mpizaha diany. Mpanelanelana amin'ny tontolo raharaha sy ny fahatsiarovana miantsena, ao amin'ny faritr'i Los Lambuang dia manolotra ihany koa ny fahatsiarovana isan-karazany sy ny fahatsiarovana avy Bukittinggi.
Fantatrao ve fa any Bandung manintona maro izay azo namangy ary tena manintona. Koa amin'ny manaraka raha mandeha any Bandung miezaka ny hampitsahatra ny efa misy manintona mpizaha tany eto ambany:
Manintona mpizaha tany any Bandung City:
Gedung Sate Bandung sy Gasibu
Miady Monument - Jl. Dipatiukur
Zokiolona Park - Jl. Cisangkuy
Governemanta Office Park Bandung
Lisitry ny Center Jl. Cihampelas
Museum Pos Indonezia - Jl. Cisanggarung.
Tranom-bakoka ny Asian-Afrika Conference
Square sy ny Grand Mosque - Jl. Asia Africa
Mpizaha tany Bandung harambato voasaron-drano eo amin'ny Avaratra:
Forest Park Dago Pakar Cave sy ny Holandy / Japana
Masolavitra Boscha Star - Lembang
Nentim-paharazana Market - Lembang
Fanahy Camp; Sahabat Alam - Jl. Sergeant Bajuri
Harambato voasaron-drano any Atsimo mpizaha tany Bandung:
Mafana Baths Ciwalini - Ciwidey
Misy Cipanunjang - PANGALENGAN
Manintona mpizaha tany any Bandung Andrefana:
Kiraro sy Bags Cibaduyut Center
Vatosokay havoana - Padalarang
Fitahirizana Ciburuy - Padalarang
Fandroana Cipanas - West Java
Pawon zohy - West Java
Manintona mpizaha tany any Atsinanana Bandung:
Cangkuang Tempoly sy Kampung Pulo - Garut
Region ny Yogyakarta manokana dia lehibe toerana fizahantany ao Java, Indonezia, miaraka amin'ny mpiaro be dia be ny fahalalana izay tsy mbola nambara.
A arivo taona lasa izay, Yogyakarta no ivon'ny fanjakana Mataram fahiny manankarena sy manana sivilizasiona avo. Fanjakana ity, izay nanorina ny tempoly Borobudur no Bodista tempoly lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao, 300 taona talohan'ny Angkor Wat any Kambodza. Vakoka tempoly iray hafa Prambanan Temple, Istana Ratu Boko Palace, ary am-polony ny tempoly hafa efa naverina tamin'ny laoniny, na dia mbola nalevina ambanin'ny tany (jereo ny Wisata Candi).
Posted by needsjobslowongankerja at 7:01 AM